Britain oo Maamul Goboleedyada dalka Kala Shaqeyn doonta Amniga iyo horumarinta | SAHAN ONLINE
Britain oo Maamul Goboleedyada dalka Kala Shaqeyn doonta Amniga iyo horumarinta
MUQDISHO – Dowladda Britain ayaa ka dhawaajisay in deegaanada maamul goboleedyada ay ka hirgelin doonto mashaariic la xiriirta arrimaha amniga,abaaraha dalka.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson iyo qaar kamid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kulan ku yeeshay Muqdisho shalay oo arbaco ahayd,halkaasoo qorshahan lagu cadeeyey.
Boris Johnson ayaa ballan qaaday in dalkiisu uu ka caawin doono deegaanadaas sidii looga horumarin lahaa dhinacyada caafimaadka,horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ,dib u dhiska guud iyo weliba amniga.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland,Hirshabelle iyo koonfur galbeed ayaa dhankooda iyana soo dhaweeyey sida Ingiriisku mar walba u taageero Soomaaliya.
Waxa ay dalbadeen in laga gacan siiyo dhisida iyo xoojinta hay’adaha maamulka,horumarinta deegaanadooda xagga ammaanka,abaaraha iyo baahiyaha kale ,wuxuuna kulanku kusoo dhamaaday is fahan iyo is afgarad.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson ayaa shalay oo arabaco ahayd booqasho lama filaan ah ku tagay magaalada Muqdisho,wuxuuna kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale.
Dowladda Ingiriiska ayaa kamid ah dalalka sida weyn u daneeya arrimaha Soomaaliya ,waxayna 110 milyan oo gini ugu deeqday dalka si abaaraha wax looga qabto.